Andinin-teny ho An’ny Taona 2015: Salamo 106:1
“Misaora an’i Jehovah fa tsara izy.” Salamo 106:1
Nisaotra an’i Jehovah ny Israelita rehefa avy novonjeny tamin’i Farao sy ny tafiny, teo amin’ny Ranomasina Mena. Manana antony hisaorana an’i Jehovah koa isika. Marina aloha hoe mora kivy isika rehefa mafy ny manjo antsika. Hatanja-tsaina sy hahery indray anefa isika raha misaintsaina ny fitahiana raisintsika.
Inona moa ny sasany amin’ireo fitahiana mamintsika? Manantena isika fa tsy maintsy hafahana amin’ny zava-drehetra mampijaly sy mampahory antsika. Fantatsika koa fa tsy hahafoy antsika mihitsy i Jehovah, ilay Mpiandry be fitiavana, na inona na inona olana atrehintsika. Omeny an’izay rehetra ilaintsika isika, mba ho afaka hanompo azy foana ka tsy hivadika aminy. “Fialofana sy hery ho antsika” foana izy, ary “mpanampy mora azo amin’ny fotoam-pahoriana.” (Sal. 46:1) Raha mifantoka amin’izany foana isika, dia ho vitantsika ny hiaritra fahoriana, na dia ny mangidy indrindra aza. Enga anie isika ka hitadidy an’ireny fitahiana ireny amin’ity taona ity, ka ‘hisaotra an’i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny hatsaram-panahiny feno fitiavana.’—Sal. 106:1.